Nin hubaysan oo Muqdisho ku laayay dad rayid ah | Berberanews.com
Home WARARKA Nin hubaysan oo Muqdisho ku laayay dad rayid ah
Nin hubaysan oo Muqdisho ku laayay dad rayid ah
Nin hubaysan oo ku labisan dareeska ciidamada Soomaaliya ayaa ugu yaraan hal qof ku dilay sagaal kalena ku dhaawacay weerar uu ku qaaday guri dadka mingiska looga tumo oo ku yaal degmada Warta nabadda oo horay loo oron jiray Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka booliska Soomaaliya Dhamme Sadiiq Adan Cali ayaa sheegay in lagu raad-joogo ninka falka geystay, ayna baaritaan ku hayaan sababta keentay inuu goobtaasi beegsado.
War qoraal ah oo ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in eedeysanaha oo lagu magacaabo Cabdikariim Dheere oo kamid ahaa jiray ciidamada dowladda Soomaaliya.
Gudoomiyaha degmada Saynab Maxamad Xaabsey ayaa sheegtay in guriga ay dadkaasi si dhuumaalaysi ah hawshooda ugu wateen, kadib markii laga soo eryay qeybo kamid ah degmadaasi.
“Ka maamul ahaan, waxaan la wareegnay guriga ay dhibaatadu ka dhacday. Dadka dhaawaca ahna waxaan geynay cisbitaallada. Dadkii ka badbaaday weerarka waxaa hadda gacanta ku haya booliska oo su’aalo weydiinaya,” ayay tiri gudoomiye Saynab oou warrantay warbaahinta maxalliga ah.
Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli todobaadkan ay booliska Soomaaliya sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen nin 8-dii bishan dad isku qoys ah ku laayay deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho.
Ninka ayaa la sheegay in laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo oo uu u baxsaday.
Previous articleSaylici oo si Rasmi ah u daahfuray Manhajka Malcaamadaha Quraanka
Next articleSomaliland says keen on stronger ties with Egypt